အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေက ဘောလုံးကို တစ်ယောက်တည်းဆက်ပြီး သယ်ဆောင်မထားနိုင်ဘူး !!!! - JAPO Japanese News
ဟူး 01 Jul 2020, 9:15 မနက်
အလုပ်လုပ်နိုင်ချင်တယ် ! လို့ဆိုပေမယ့် အဲလောက်လွယ်လွယ်နဲ့ ကျွမ်းကျင်ဆည်းပူးနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ယူရတဲ့အတွက် အခုက ကျွမ်းကျင်မှု အချိန်အတိုင်းအတာ မရောက်သေးတာလား?
တစ်ခုရှိတာက အခုကနေစပြီး လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို ပြောပြပါမယ်။
အဲဒါကတော့တစ်ယောက်တည်း ဘောလုံးကို မသယ်ထားရပါဘူးဆိုတဲ့ အရာပါ။
အဓိပ္ပာယ် နားမလည်ဘူး ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်နော်? ရှင်းပြပေးပါမယ်။
အလုပ်ဆိုတာက တစ်ယောက်တည်း အားလုံးကို ပြီးစီးအောင် လုပ်ရတဲ့ အရာက အနည်းငယ်သာရှိပြီး အမျိုးမျိုးသော သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင်ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ရတာများပါတယ်။
ဒီလို အသင်းအဖွဲ့ နဲ့ လုပ်ရတဲ့ ထဲမှာမှ ‌ဘောလုံးကို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်မှသာ အလုပ်ကို ရှေ့ဆက်လို့ ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ ဘောလုံးပွဲကို ဉပမာပြုထားတာပါ။
ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ဘောလုံးကို မြန်မြန် အဖွဲ့ဝင်အခြားတစ်ယောက်ဆီကို မပို့နိုင်ဘူးဆိုရင် အခြားတစ်ယောက်က စောင့်နေရတဲ့ အချိန်ကြောင့် အခြားအလုပ်တစ်ခုကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ သင်ပါဝင်တဲ့ သင့်ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အားလုံးကို နှေးကွေးသွားစေပါတယ်။
တူညီတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့ သူတွေရဲ့ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းကို အသုံးပြုရင်တောင်မှ နှေး‌ကွေးစေမှာပါ။
ဒါဟာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကိုတင်မကဘဲ ဖောက်သည်တွေနဲ့ပါ သက်ဆိုင်စေပါတယ်။
ဘယ်လို အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဖောက်သည်တွေရဲ့ အတည်ပြုမှု အားပေးမှုဆိုတာ လိုအပ်တယ်မလား?
အကယ်၍ သင်သည် သူတို့အားလုံးကို လုပ်ငန်း‌ဆောင်တာအားလုံးမပြီးခင်အထိ စောင့်ဆိုင်းစေပါက ဖောက်သည် သည် ဤအချိန်အတွင်း မည်သည့်အရာမျှ လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
စောင့်ဆိုင်းနေရခြင်း၏ရလဒ်အနေဖြင့်၊ နောက်ဆုံးအားလုံး ပြီးဆုံးသည့်အချိန်မှ ရမယ်ဆိုရင် ရက်ပေါင်းများစွာကြာနေပါလိမ့်မည်။အဲဒီအတောအတွင်း သင်က ဘာမျှမပြုလုပ်ဘဲ အရာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ထားမယ်ဆိုရင် အချိန်တွေပုပ်ကုန်မှာပေါ့ ?
ဒါကို ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ချင်လျှင်တော့ သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာက လုပ်လို့ပြီးသွားတဲ့ ကုန်ချောထုတ်ကုန်မှ ရှိတဲ့ပမာဏကိုစုဆောင်းပြီး ဖောက်သည်ထံသို့ အတည်ပြုပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဖောက်သည်စစ်ဆေးနေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ
သင်မှာ လုပ်စရာတွေအများကြီးကျန်သေးတယ်၊ ဒါဆို အဲဒါတွေကို ဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်။
ပြီးတဲ့အခါမှာဖောက်သည်က တုန့်ပြန်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် နောက်ထပ်အတည်ပြုချက်ကို လွှင့်ပစ်ပါ။ဘောလုံးက မြန်မြန်နဲ့ ပိုပိုပြီးလည်နေတယ်။
သူတို့ကို အတူတကွမထည့်ထား မသယ်ထားဘဲ၊ သေးငယ်သောဘောလုံးများအနေဖြင့် တစ်ခုပြီးတစ်ခု မြန်မြန်ဆန်ဆန် လှုပ်ရှားနိုင်ပြီပေါ့။
လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ပါ၀င်ပတ်သက်သူတိုင်းက စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ အချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်လျှင်၊
သင်သည် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းထက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဲဒါဟာ ပါဝင်ပတ်သက်သူတိုင်းရဲ့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်လို့ပါပဲ။ပြီးတော့ သင်ဘောလုံးကိုပစ်သည့်အခါ (လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့အခါ၊လွှဲပေးတဲ့အခါ) မှတ်စုများကိုလုပ်ထားပါ။
· requested မည်သည့်အလုပ်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာလဲ
· မည်သည့်အချိန်တွင်တောင်းခံပြီး ဘယ်‌တော့အတည်ပြုမည်နည်း ?
ဘောလုံးကိုသူများကို ပစ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခြားသူဆီပေးလိုက်ပြီးပြီးဆိုပြီး အရေးမကြီးတော့ဘူးဆိုတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ သင်ပစ်ချသည့်ဘောလုံးကို စနစ်တကျပြန်လာရန် တိုက်တွန်းနိုင်ရန် ရက်စွဲတစ်ခု သတ်မှတ်၍ မှတ်စုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပါ။
ပို့လိုက်ပြီးတာနဲ့ OK ဆိုပေမယ့် လေထဲမှာ ကိုယ့်အဖွဲ့ထဲကနေ ပျောက်သွား လွတ်သွားတာလဲ ရှိတတ်လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်မှတ်စုအနေနဲ့ မှတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
ဘယ်အချိန်မှာစစ်ဆေးတာလဲ? ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်နေ့၌ မှတ်စုတစ်ခုချန်ထားမယ်။
ဤအရာတွေကိုရေးပြီးပါက ဤကိစ္စကိုမေ့ပြီး အခြားအလုပ်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
အခြားပါတီမှ ပြန်ကြားချက်လာပါကလည်း မှတ်စုမှတ်ထားလို့ အိုကေပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင် မှတ်စုစာအုပ်ရေးထားတဲ့ အနာဂတ်ရက်တွေမှာ လုပ်ရမှာတွေကို မှတ်စုစာအုပ်ကြည့်လိုက်ရင် မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။
မည်သည့်အချိန်တွင်စစ်ဆေးရမည်ကိုမှတ်သားပါ။သင်တစ်နေ့တာရဲ့ လုပ်ရမယ့် အရာများကို မှတ်စုစာအုပ်ဖြင့်စစ်ဆေးပြီး ရုံးအလုပ်နှင့်အတူ အခြားလုပ်ငန်းများလည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
သင်လုပ်ရမည့်အရာမှာ သင့်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ လာမည့်တနင်္လာနေ့ရဲ့စာမျက်နှာမှာ လုပ်ရမယ်ဆိုတာကို ရေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ရမယ် လုပ်ရမယ်သာ တွေးနေမိပြီး မလုပ်ဖြစ်လည်း အပိုပါပဲ။
အခြားသူများ နှင့် အနာဂတ်ရဲ့သူကိုယ်တိုင်ဆီကို ချက်ချင်း ဆက်ဆက်အရောက်ပို့ကြပြီး
သူရော၊သူနှင့်အလုပ်လုပ်သောသူများရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုစွမ်းရည်ကို အတူတူတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုအထူးစွမ်းရည်မှ မလိုအပ်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် ဒါဟာအံ့သြလောက်အောင်အကျိုးရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ထက်စွမ်းရည်နိမ့်ကျသူက ဘာလို့ အကဲဖြတ်ခံရတာလဲ ?!!!!
“ The Great Wave off Kanagawa” တော်ဝင်ပန်းချီကားကို LEGO ဖြင့် 3D ပုံသဏ္ဍာန်ဖန်တီးလိုက်သူ
တောထဲ camp ထွက်တတ်သူတို့ သတိမမူလျှင် ကံဆိုးမည့်နေ့..